मध्य राती चिहान खन्ने झांक्रीको थानमा आएर एक व्यक्तिले झांक्रिकै जोखाना हेरीदिए, जोखाना सुन्दा सबै चकित भए ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
March 9, 2021 AdminLeaveaComment on मध्य राती चिहान खन्ने झांक्रीको थानमा आएर एक व्यक्तिले झांक्रिकै जोखाना हेरीदिए, जोखाना सुन्दा सबै चकित भए ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
करिब छ बर्ष अगाडी मृ’त्यु भएका जीवन राईको आत्मा हरेक बि’रामीमा पसेर बोल्न थालेपछि गाउँ नै त्र’सित बनेको छ । बच्चादेखि वृद्ध सबै बि’रामी परेपछी धामी ले चिन्ता बस्न सुरु गरेको तीन दिनसम्म पनि केही पत्ता नलागेपछि केही गाउँलेहरुले धामीलाई कु’टपि’ट समेत गरेका थिए ।
भाइरल झाक्रीले आफ्ना चेला र चेलीहरुलाई दियो कलस दिनका लागि यसरी परिक्षा लिदा रहेछन । उनले एक जना चेलालाइ आफ्नै गुरुको जोखाना हेर्न लगाएका छन् ।